Manchester united iyo chelsea oo Haaland ka gudbiyeen lacag dhan78m.
Home Suuqa kala iibsiga Manchester united iyo chelsea oo Haaland ka gudbiyeen lacag dhan78m.
Kooxda ka dhisan wadanka Chermalka ee Borussia Dortmund ayaa dooneysa ineey saro u qaado qiimaha uu halland kooxda ka qaato si uu sare ugu kaco lacagta hadii ay kooxi soo dalbadaan lacagtaas ayaan ku ka ceysa £300,000.
Erling Haaland ayaa lagu qiimeeyaa lacag gaareysa £78 million ($109m) waana heshiiska lagu burburin karo qandaraaska uu kooxda brousia kula jiro kooxo waaweyn ayaa wada doonayaan waxaana ka mid ah Manchester City, Manchester United, Chelsea iyo Real Madrid.
Sida ay fahamsan tahay The Daily Star xidigaan ayaa dalbanaya in la siiyo lacago waali ah oo mushaarkiisa ah kooxda brousia ayaana dooneysa in shan sano oo heshiis ah la siixato xidiga reer norwey isbuucii waxaa uu doonayaa £300,000.
Previous articleMauricio Pochettino oo bedelka Mbappe u arka harry kane.
Next articleBarcelona oo soo saartay liiska shanta weeraryahan ee Suuqa ka dooneyso